Oke Osimiri Adriatic: njirimara, mkpa na akụnụba | Netwọk Mgbasa Ozi
N'ime Oke Osimiri Mediterenian enwere obere akụkụ nke oke osimiri a nke gbatịrị n’etiti ụsọ gburu-gburu. Otu n'ime akụkụ ndị a bụ Oke osimiri Adriatic. Ọ bụ akụkụ nke sitere na peninshula Italiantali na ụsọ oké osimiri ọdịda anyanwụ nke Balkan peninshula. O nwere ogologo ihe dịka kilomita 800 na obosara kachasị nke kilomita 200. Ọ bụ oké osimiri nwere nnukwu azụmahịa na mmasị ndị njem nleta.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị gbasara njirimara, nhazi na mkpa nke Oke Osimiri Adriatic.
2 Oké Osimiri Adriatic na ụsọ oké osimiri Italiantali
3 Oke Osimiri Adriatic na Balkan
4.1 Ihe ndi ozo
Ọ bụ akụkụ nke Oké Osimiri Mediterenian na-agbatị site na Ọwara Oké Osimiri Venice n'ebe ugwu ọdịda anyanwụ ruo Strait nke Otranto na ndịda ọwụwa anyanwụ. Gburugburu ebe nke Adriatic Sea bụ mkpokọta 160.000 square kilomita na ya omimi omimi bụ naanị 44 mita. Ọ bụ otu n’ime mmiri na-emighị emi n’elu ụwa dum. Akụkụ nke nwere omimi miri emi dị n'etiti Gargano na Durres ma mesịa ruo omimi nke mita 900.
Ọ bụ ezie na ọ bụghị nnukwu mmanya, ọ na-asa oke osimiri nke mba 6. Mba ndị a bụ ndị a: ,tali, Slovenia, Croatia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro na Albania. Aha Osimiri Adriatic sitere na ógbè Etruscan nke Hadria. Cologbè a dị n'ụsọ osimiri Italytali, ọ bụ ya mere ndị Rom ji kpọọ ya Mare Hadriaticum.
N'ime ikuku juru ebe niile anyị na-ahụ n'oké osimiri a kacha na mpaghara a na-akpọ ya aha nke bora. Ọ na-ada ike nke ukwuu na northeast, ebe a na-akpọ ikuku ọzọ bụ nke a na-akpọ sirocco. Ifufe a dịtụ obere na-abịa site na ndịda ọwụwa anyanwụ. Ifufe abụọ a na-agbanwe n'afọ ọzọ n'afọ na-adabere n'oge ọ bụ.
Ebe ọ bụ oke osimiri miri emi, ọ nwere otu nnukwu ebili mmiri a na-akpọkarị Osimiri Mediterenian niile. E nwekwara nnukwu ọdịiche dị n’etiti akụkụ ya abụọ. N'otu aka, anyị nwere ụsọ mmiri Italiantali nke nwere ọdịdị kwụ ọtọ ma na-aga n'ihu ma enweghị agwaetiti ọ bụla. N'aka nke ọzọ, anyị nwere ụsọ oké osimiri Balkan, nke kachasị n'ụsọ osimiri Croatian, ọ jupụtara ma jupụta na agwaetiti dịgasị iche iche. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ agwaetiti niile nwere ọdịdị elongated ma dozie ya na ụsọ oké osimiri.
Oké Osimiri Adriatic na ụsọ oké osimiri Italiantali
Anyị maara na Oké Osimiri Adriatic nke dị n'akụkụ Italiantali gbatịrị na kilomita 1.250 nke ụsọ oké osimiri. Ọ na-amalite n’ọdụ ụgbọ mmiri Trieste n’ebe ugwu ruo Cape nke Otranto. A na-akpọ ya ikiri ụkwụ nke buut nke ala mmiri Italiantali.
Isi Ihe ọghọm nke ụwa na anyị na-ahụ n'oké osimiri a bụ ndị na-esonụ: Osimiri Trieste, Po delta na Ọwara na ọdọ mmiri nke Venetian, ha niile dị n’ebe ugwu. N'ebe ndịda ọzọ anyị hụrụ ala Gárgano na Puglia peninsulas nakwa Golgo de Manfredonia.
Dị ka anyị kwuru na mmalite nke isiokwu ahụ, ọ bụ oké osimiri dị oke mkpa akụ na ụba. Ma ọ bụ na ọ nwere ọdụ ụgbọ mmiri ole na ole nwere nnukwu akụ na ụba. Portsgbọ mmiri ndị a dị, site na mgbago ugwu ruo na ndịda: Trieste, Venice, Ravenna, Rimini, Ancona, Bari na Brindisi.
Oke Osimiri Adriatic na Balkan
Ka anyị nyochaa akụkụ nke ọzọ nke Oké Osimiri Adriatic. Akụkụ nke oké osimiri a na-egbutu karịa ma nwee ọtụtụ agwaetiti. N'ihi ya, n'ụsọ oké osimiri nke Balkan Adriatic nwere ogologo nke 2.000 kilomita. Ogologo a malitere na ọdụ ụgbọ mmiri Slovenia nke Koper ruo Strait nke Otranto.
Na ngwụsị nke akụkụ ugwu bụ ebe mmiri dị na Istrian. Coastsọ mmiri a na-akpọ Dalmatian, nke dị na Croatia, malitere na ala a dịịrị banye na mmiri. Ihe dị omimi banyere ụsọ oké osimiri ọwụwa anyanwụ a bụ ihe dịka agwaetiti 1.200 nke nha dịgasị iche n'ụzọ dabara adaba na-ezo aka na akara nke Dalmatian. Agwaetiti kacha mkpa na nha bụ Cres, Krk, Pag, Hvar, Brač na Korčula, tinyere ọtụtụ ndị ọzọ. South nke Dalmatia bụ Bay nke Kotor.
Isi ọdụ ụgbọ mmiri azụmahịa ndị dị n'akụkụ Oké Osimiri Balkan Adriatic dị, site na mgbago ugwu ruo na ndịda: Rijeka, Split na Dubrovnik (Croatia), Kotor (Montenegro) na Durres (Albania).
Oké osimiri a, ọ bụ ezie na ọ pere mpe, dị nnukwu mkpa akụ na ụba maka ọrụ dị iche iche mmadụ na-eme. Anyị ga-ahụ ihe bụ isi mmalite akụ na ụba nke Osimiri Adriatic na-enye obodo niile gbara ya gburugburu.
Ndị a bụ ihe nchekwa mmiri gas nke achọpụtara chọpụtara ihe dị ka ọkara narị afọ gara aga. Ọ bụ ezie na achọpụtara ha n'oge gara aga, ha malitere irigbu ha n’afọ ndi 90. Na-aga n'ụsọ osimiri Emilia-Romagna enwere ihe dị ka nyiwe gas 100. A na-eji gas a enye eletrik na obodo ndị gbara ya gburugburu.
N'ebe ugwu, na Po Basin, anyị na-ahụ ụfọdụ ihe nkwụnye mmanụ dị mkpa. Ọtụtụ n'ime nkwụnye ego ndị a ka nọ na mpaghara nyocha ebe ọ bụ na nso nso a ka achọpụtara.
Ọ bụ ọrụ ọzọ dị mkpa na akụ na ụba nke na-eme n’Oké Osimiri Adriatic. Ọ bụ ọrụ akụ na ụba bụ isi na mpaghara a kemgbe ụwa. Kaosinadị, ugbu a, n'ihi na mmadụ, enwere nnukwu nsogbu ịkụ azụ gabiga ókè. Mmekọ ndị kachasị elu kwekọrọ na mpaghara Italytali. Ọ bụ ebe a ihe dị ka mmadụ 60.000 nwere ọrụ ịkụ azụ, na-anochi anya 40% nke mkpoputa mmeputa azu nke mba.
N'ikpeazụ, ọrụ akụ na ụba nke na-enye uru na mpaghara ndị gbara ya gburugburu bụ njem. Mba ndị dị n’Oké Osimiri Adriatic bụ ebe dị mkpa ndị njem nleta. Mpaghara ndị bụ isi bụ: mpaghara Veneto na Emilia-Romagna n'ụsọ oké osimiri, ma intali, ma Dsọ Oké Osimiri Dalmatian nke Kroeshia. Ọ bụ ezie na ọ bụghị isi, njem bụ isi iyi nke ego maka mba nke Balkan. Karịsịa ịbụ ihu ọma Croatia na Montenegro. Ọtụtụ n'ime ngwaahịa anụ ụlọ nke mba ndị a bụ akụkụ nke ọrụ nlegharị anya.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Oké Osimiri Adriatic na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Nkewa » Oke osimiri Adriatic